DAAWO: Jubbaland miyey aqbashay in waqti dheeraad ah ay ku darto Is diwaangalinta Musharaxiinta?
KISMAAYO(P-TIMES) – Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulamadii khaaska ahaa ee dhexmaray guddiga Doorashooyinka Jubbaland iyo wakiilada caalamiga ah, kuwaas oo diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka.
Beesha Caalamka ayaa doonaysa in 3 maalmood lagu daro waqtiga isdiwaangalinta Madaxweyne-nimada, waxaana caqabada ugu weyn ay ka wajahaysaa habraaca doorashada iyo arrimaha ku wajahan musharaxiintii hore oo diidan.
Guddiga warar aan ka helnay ayaa sheegaya in ay wali leeyihiin kulamo gaar ah oo ay uga wada hadlayaan arrimahan, waxaana kulamadaas ka dib lafilayaa in ay soo saaraan go`aan rasmi ah oo kuwajahan xaaladdan.
Xukuumadda Jubbaland ayaa guddiga iskaga xawishay beesha Caalamka oo maanta soo gaartay Kismaayo, waxayna sheegeen in aysan iyaga khuseyn.
HALKAN KA DAAWO WARARKII UGU DAMBEEYEY
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan oo wafdiga hogaaminayay ayaa kulan saacado dheer qaatay la yeeshay Madaxda Jubbaland, waxayna ka wada hadleen arrimaha doorashada, iyadoo uu dalabka beesha Caalamku ahaa labo qodob in ay ka doonayaan Jubbaland.
Labada qodob ayaa kala ahaa in ay Jubbaland aqbasho in mudo dheeraad ah lagu darro diwaangalinta Madaxweyne-nimada tartanka iyo in sharuudaha musharaxiinta wax laga bedelo, waxaana labadaas qodob ay ka duwaanayaan kuwii shalay ay Kismaayo latageen wafdiga Itoobiya.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa u sheegay wakiilada caalamiga ah in labada qodob-ba ay u taalo guddiga Doorashooyinka madaxa banaan, ee aysan aheyn shaqo u taala Xukuumadda Jubbaland, sidaas awgeedna ay guddiga wada xaajood la yeeshaan.